Nepal Deep | ‘आन्दोलनका अगुवा देखेर जनताले बुझे, सेफल्याण्ड नगरे वकिल पेशा नै बदनाम हुन्छ’
‘आन्दोलनका अगुवा देखेर जनताले बुझे, सेफल्याण्ड नगरे वकिल पेशा नै बदनाम हुन्छ’
काठमाडौँ। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्द नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन बदनामी तर्फ उन्मुख देखिन्छ। जनताको न्याय पाउने मौलिक हक विरुद्ध बार एसोसिएसन लागेको भन्दै आन्दोलनमा जनसमर्थन भन्दा पनि जनआक्रोश देखिन थालेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि वकिलहरूलाई चित्रित गर्न मानिसहरुले अत्यन्तै तल्लो स्तरका शब्दहरु प्रयोग गर्न थालेका छन्। ‘कालोकोटे दलाल,’ ‘फटाहा,’ ‘तस्कर,’ ‘माफिया,’ जस्ता शब्दावली अहिले वकिलहरुको लागि प्रयोग गर्न थालिएको छ। त्यति मात्र होइन, वकिलबारे जनमानसमा यति नराम्रो धारणा बनेको छ कि केही दिन पहिले अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रले अदालत सुधार्न आफू पहिलो सहिद हुन तयार रहेको भनिरहँदा त्यसबारे सामाजिक सञ्जालका टिप्पणी हेरी नसक्नु थिए। उनलाई समर्थन भन्दा पनि गालीको वर्षा थियो।
एक अधिवक्ताका अनुसार बारको आन्दोलन यति बदनाम हुनुको पछाडी यसका अगुवाहरु जिम्मेवार रहेको बताए। अगुवाको मुख देखेर नै जनताले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा माथि षड्यन्त्र भइरहेको बुझेको उनको भनाइ थियो। ‘अगुवा गतिलो नहुँदा आन्दोलन यो हदसम्म बदनाम हुने रहेछ भन्ने बुझियो। जनताले वकिलको माग हेरेनन्। जनता बाठा भइसकेछन्। हेरे त अगुवाको अनुहार। शम्भु, रमण, चण्डेश्वरको अनुहार। उनिहरुका अभिव्यक्ति सम्झिए। अनि बुझे यो त षड्यन्त्र हो भनेर,’ उनले भने।
ती अधिवक्ताका अनुसार केही दिन अझै आन्दोलन चले वकिलहरूलाई जनताले प्रतिकार गर्नेछन्। ‘वकिल’साबहरुलाई के भ्रम छ भने, हाम्रो विरोध गर्ने ‘भिजलान्ते’ हुन भनेर। यसरी न्याय सेवा ठप्प पारेपछि सारा जनता भिज्लानते हुन तयार हुनेछन्। प्रतिकार हुन्छ। त्यतिबेला नराम्रो स्थिति बन्न सक्छ। त्यो एक्स्ट्रिमसम्म नपुगौं भन्ने सुझाव हो,’ उनले भने।
न्यायधीशहरुले त्यो कुरा बुझेर प्रधानन्यायधीश राणासँग सम्झौता गरेर इजलासमा बस्न थालेको पनि उनको दाबी छ। न्यायधीशहरुले बठ्याइ गरेर सारा कलंक बारमा थुपारिदिएको उनले बताए। ‘न्यायधीशहरुले कुरा बुझे। जति आन्दोलन गर्यो उति बदनाम भइन्छ भन्ने। विचरा! अहिले वकिलहरू एक्लै भए। अब बदनामीको सबै कलंक वकिलमाथि पर्छ। त्यो पनि नबुझेर अझै आन्दोलन गर्छौ भन्छन्! अझ बारका एक जनाले त प्रधानन्यायधीशले राजीनामा नदिए सडक नै ठप्प पार्छु दिएछन्। सर्वोच्च भित्र आन्दोलन गर्दा त प्रतिकार भएको छ। सडकमा गए भने त के होला? कालोमोसो दल्छन् जनताले।’